Futurizz dia mitondra antsika ny fiovana sy ny fivoaran'ny marika | Famoronana an-tserasera
Omexpo avy amin'i Futurizz ary ny fivoaran'ny endrika
Miaina amin'ny fanovana tsy tapaka isika ary amin'izany, samy miova isika sy ny manodidina antsika ary rehefa mandeha ny fotoana dia mamela ny olona ny teknolojia manana fampisehoana avo kokoa hanatanterahana ny hetsika ataon'izy ireo, noho izany, ny fanavaozana dia zavatra manakaiky eo amin'ny fiainantsika.
Ny teknolojia miovaova ao anatin'ny fiainantsika miaraka amin'ny tanjaka mihombo ary ao anatin'ny fotoana fohy kokoa, ny fanaovana ny asa isan'andro ho voafintina sy mifangaro kokoa ary izany no fomba hanazavana ny fomba ny marketing nomerika dia notsidihan'ny fivoarana miandalana mendrika be tokoa izy ao amin'ity orinasa lehibe ity ka androany miarahaba endrika ny mpanjifany.
1 Omexpo avy amin'i Futurizz ary ny fivoaran'ny endrika
2 Ny fivoaran'ny marika sy ny endrika
Ity lahatsoratra ity dia hanolotra ny tranga ny fivoaran'ny iray ireo hetsika lehibe indrindra eto amin'ny firenena amin'ny sehatry ny asa nomerika, Omexpo avy amin'i Futurizz, fampirantiana izay tao amin'ireo fanontana telo ambin'ny folo nanehoana taminay ny fizotry ny fanovana ny orinasa manohana azy ireo manavao ny marketing nomerika.
Futurizz dia orinasa marketing nomerika manan-danja amin'izao fotoana izao manana fiainana mihoatra ny 13 taona, izay mampivelatra ny asany ao an-tanànan'i Madrid. Ny orinasa dia nahatratra ny lazany noho ny Hetsika goavambe atao amin'ny fotoana sasany amin'ny taona, toy ny "Omexpo", foara fivarotana izay ahitanay mpiranty maherin'ny 120 tamin'ny andiany farany niaraka tamin'ny mpitsidika maherin'ny 7500, afaka andro vitsivitsy dia afaka manatrika ny Omexpo 2017 vaovao navoakan'i Futurizz izahay.
Futurizz, miaraka amin'ny fahombiazana lehibe rehefa mandeha ny fotoana, dia nahazo mpanjifa marobe amin'ny sehatra sy seho varotrao ary tamin'ny tapaky ny taona 2015, ny taleny dia nandinika ny fanovana farany ny sarin'ny orinasan'ny orinasa, ary koa ny fanavaozana ny rafitra metodolojika rehetra an'ny foara.
Raha fintinina, tonga ny fanovana, manomboka amin'ny kely indrindra ka hatramin'ny antsipiriany lehibe indrindra Ny orinasa dia nanova ny lafiny rehetra amin'ny hetsika nataony, ao anatin'izany ny fizarana ny habaka misy azy, ny fomba fanatonan'ireo mpiasa ny mpanjifa, ny sehatra, ary ny loko am-boalohany an'ny marika.
Manohana ny firoboroboany manavao, ny teny Futurizz dia mahafaoka ny ho avy sy ny orinasa amin'ny teny iray. Ny tarigetrany dia "Ny ho avin'ny orinasa niomerika" ary eo amin'ny sehatry ny foara misy azy io dia manampy ny fiantsoana ireo mpandray anjara aminy hamorona tambajotran'izy ireo manokana, hampivelatra sy hamporisihana ireo fiaraha-mientana ireo ho an'ny fiarahamonina.
Ary koa, ny lokon'ny endrika ambadika ankafizo ireo toetra ireo, mba hahatratra ny mpanjifa amin'ny fomba manintona kokoa
Ny fivoaran'ny marika sy ny endrika
Ny zavatra mahaliana indrindra amin'ny tranga iray manontolo dia ny fanovana an'io sary na nomerika sy azo tsapain-tanana Tao anatin'ny 6 herinandro monja no nanatanterahana azy ary ny fivoaran'ny orinasan'ity orinasa ity dia maneho ny mety ho fandrosoan'ny marketing nomerika, vokatr'izany, amin'ny tombatombana, taha ambony kokoa amin'ny mpanjifa amin'ny taona ho avyFahombiazana 11 taona monja dia manomboka izao dia ho lasa revolisiona fivarotana sy ny kanton'ny marketing.
Raha tsorina Futurizz dia manana rafitra vaovao, izay vao nanomboka ny fiovana maro izay miha-mihombo hatrany amin'ny tontolontsika. Ny marketing nomerika dia iray amin'ireo faritra an-tapitrisany izay efa eo am-pivoarana tanteraka ankehitriny.
Futurizz sy ny Foara Omexpo, dia ny tarehy rahampitso anio, hetsika iray izay tsy maintsy hatsahantsika ny fiheverana antsika mba haharaka ny vaovao farany amin'ny sehatry ny varotra an-tserasera ary raha tsy ampy izay rehetra lazainay anao, dia aza miandry ary miditra amin'ny kianja fanaovana 26 sy 27 aprily tany Madrid.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Famoronana an-tserasera » Fitaovana famolavolana » Omexpo avy amin'i Futurizz ary ny fivoaran'ny endrika
Icons- Icons, motera fikarohana kisary
Ireo no boky izay tsy hain'ny mpamorona sary misakana ny fividianana